ATOM Trudograd: inonakidza kwazvo RPG yeLinux inokuyeuchidza nezvevamwe | Linux Vakapindwa muropa
ATOM Trudograd chinyorwa chitsva cheiyi RPG zita, ndiko kuti, zano revhidhiyo mutambo uyo wave nekunakidzwa nekuda kwekuwedzera uku. Ichokwadi ndechekuti ATOM yakave neyakanaka ongororo uye inowanikwa yeLinux, saka iri poindi mukufarira kwayo kwekusatombofanira kushandisa Waini / Proton kana chero chinhu chakadai kugona kutamba.
Ane a inonakidza mifananidzo yakajeka, uye inogona kukuyeuchidza nezve mamwe ane mukurumbira uye blockbuster mitambo yemavhidhiyo kubva kare mune dzimwe nzira. ATOM inotevera mutsoka dzeKudonha uye Wasteland, uye Trudograd yave kuwanikwa muKutanga Kuwana uye yaizosvika paLinux vhiki ino paValve's Steam chitoro. Ichave zvakare kuwanikwa kubva kune mamwe mapoinzi, senge iyo GOG chitoro.
Zvingave zviri muKutanga Kuwana ingangoita mwedzi mitanhatu, vanofungidzira. Asi iwe unotoziva kuti izvi hazvisi zvinogara zvichinyatsoitika uye pane shanduko zvinoenderana neanogadzira anowana mhinduro kune mamwe matambudziko kana kunonoka.
Pindai hunhu Izvo zvakakosha zveATOM Trudograd ndeizvi:
Iwe uchave uine pamunwe wako guta hombe uye nzvimbo zhinji kwaunogona kurwira, kutengesa, kutaura nevamwe vagari, kuongorora nzvimbo nyowani, nezvimwe.
Icho chiitiko-chakatenderedzwa chiitiko chine yakawanda yekuchinjika maererano nemauto ehondo, kugona, nezvimwe.
Mavara akasarudzika, uye mumwe nemumwe ane hunhu hwakasiyana uye kutaurirana.
Iwo mamishini ane mhinduro zhinji, saka unogona kushandura mamiriro ese eguta nekukurumidza.
Unogona kuendesa gamba rako kubva yapfuura vhezheni ATOM RPG.
Kurerukirwa kwekushandisa uye yakanaka kwazvo kutamba. Izvi zvinotevera maitiro echikamu chekare, asi nenhau.
Huwandu hukuru hwekuchinja uye kugadzirisa pamusoro wekare zita. Chibereko chemakore maviri ebasa rekuvandudza vasingaregi zvakakwana kuti vape vatambi izvo zvavari kutsvaga chaizvo. Uye vakabudirira! Ichokwadi kuti unofanirwa kuyedza ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » ATOM Trudograd: inonakidza kwazvo RPG yeLinux